RASMI: Kulankii saaxiibtinimo ee Barcelona iyo Al-Ahli oo la baajiyay – Gool FM
RASMI: Kulankii saaxiibtinimo ee Barcelona iyo Al-Ahli oo la baajiyay
Liibaan Fantastic May 18, 2016
(Barcelona) 18 Maajo 2016 Shirkada duulimaadka diyaaradaha ee Qatar Airways ayaa si rasmi ah u shaacisay in la baajiyay kulankii saaxiibtinimo ee dhexmari lahaa Barcelona iyo kooxda dalka sucuudiga ee Al-Ahli.
Kulankaan ayaa la qorsheeyay in laciyaaro talaadada nagu soo aadan, waxaana la qoondeeyay in lagu ciyaaro dalka Qatar.
Laakiin wada hadalo dhexmaray Barcelona iyo Qatar Airways ayaa keenay in dib loo dhigo kulankaan saaxiibtinimo maadama Barca ay axada laciyaari doonto Sevilla Final-ka Copa del Rey.
War ka soo baxay Qatar Airways ayaa lagu yiri:
“Kulankii saaxiibtinimo ee u dhexeeyay Barcelona iyo Al-Ahli lama joojin laakiin dib ayaa loo dhigay, dib ayaana laga shaacin doonaa waqtiga laciyaari doono, waxaana la filayaa inuu noqdo xiliga isdiyaarinta ee xiliciyaareedka cusub”.
Kaddib is-casilaadii Michel Platini, goorma ayay UEFA dooraneysa madaxwayanaha cusub?